Iny lambako iny - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Iny lambako iny
Tononkalo fahatelo an’i Ikaloyna Vony ity haroso ho anao mpamaky ity. Mianofa anaty kanto koa mahazò fy e.
Nasehony ahy androany ilay rovitry ny akanjoko
voahazony fahiny tanaty adinay, nifampirirodrirotra.
Tsaroako tamin'izay fa satriko ho voasintony
hanatona ny tratrany ho toy ny babo an'ady hanaovany izay tiany.
Satriko ho resiny mba tsy ho afaka mandositra aho,
satriko ho voatanany tsy ho afaka mandeha,
satriko ho giazany hidiany anaty fony aho.
Nasehoko azy kosa ny foko mbola banga
tsy feno hatramin'izao, tsy azony nampiana.
Tsaroany tamin'izay fa satriny hozairina
hiraikitra amin'ny ahy ny fony niniany norimbonana.
Satriny hikambana hitambatra ho iray,
satriny hifameno hitovy hasambarana,
satriny hiombona hiray fitomaniana.
Iny rovi-dambako iny navadikay ho tady
nafehy ny fony rimbona tsy nahatazona ahy.
Ny silaky ny fony nasosonay ny akanjoko
izay nentiko niverina fa tsisy mety hanampina.
Kanefa raha ny marina : tsy misy mahalala,
tsy misy mety mino
hoe iny lambako iny, ilay lambako omaly,
hoe iny lambako iny : mbola lambako androany !